Rudido - Wikipedia
(Redirected from Mwendaenda)
Mwenje mitatu, rudido rwunokwira kubva pamwenje uri pamusoro kuenda kune uri pasi. f anomirira rudido rwuchipimwa nema hertz (Hz), kureva dendera pa sekondi. T anomirira nhambo ichipimwa nema sekondi (s), kureva nhamba yema sekondi pa dendera rimwe.
Muchidzidzo fundoyetsimba, rudido (Frequency) - iri izwi rinotaura huwandu hwechiitiko chinodzokorora, kuti chiri kuitika kangani kuchiverengwa pachiyero chenguva. Rudido rwunopimwa nechiyero chinonzi Hertz unove mupimo unoreva kuti chiitiko chiri kuitika kamwe paSekondi imwe. Chititiko chinoverengwa chichitangira nokuperera panzvimbo imwe kureva kuti kana chapera kuitika panenge pave nokudzokera panzvimbo pavambwa kuverengwa.
Magetsi emuZimbabwe ane rudido rwe 60 hertz.
Ruwoko rwunotaridza masekondi pachiringazuva rwune rudido rwe 60 pamineti hour imwe.
Injini yemotokari ine rudido hwunodarika 2000 dendera pamineti.
Masaisai ane rudido rwakasiyana; ari kuzasi ane rudido rukuru kudarika ari kumusoro. Akiso iri pamusandarara inotaridza nguva.
Kudidirika (Go somewhere frequently; 2. Go frequently). Ndakadidirika kutsime: I went to the well several times.
Ukarambodida kuhwahwa, mukadzi wako achashaya chouviri: if you continually frequent the beer hall, your wife will lack the necessaries of life.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudido&oldid=47854"
This page was last edited on 5 Mbudzi 2016, at 14:08.